Kala soco WiFi SD Card, kudar WiFi kaameradaada | Wararka IPhone
Wararka IPad | | iPad
Qaar ka mid ah moodooyinka kamaradaha ayaa muddo dheer ku darayey WiFi, in kastoo caadi ahaan haddii aan ka hadalno kaamirooyinka SLR, haddana qiimuhu weli waa sarreeyaa. Sidoo kale, haddii aad horey u haysatid kamarad wanaagsan, uma maleynayo inay mudan tahay in la beddelo moodeelka sababtaas darteed. Nasiib wanaag waxaa jira fursado aad uga jaban suuqa oo ku daraya noocan isku xirnaanta kamaraddaada, raadinta badan ka dib waxaan go'aansaday inaan isku dayo Trascend WiFi SD Card, mid ka mid ah qiimaha ugu fiican moodooyinka lacagta aan helay. Dhamaan faahfaahinta, hoosta.
1 Maxaad ugu dartay WiFi kamarad?
2 Qiimo wanaagsan lacag
4 Firmware cusboonaysiinta
Maxaad ugu dartay WiFi kamarad?
Xaqiiqdii qaar badan ayaa ku siin kara daraasiin sababo ah, kiiskeyga mid ayaa ahaa midka aasaasiga ah: inaan awood u yeesho inaan ka helo sawirada aan ku qaado kamaradayda caadiga ah ee loo yaqaan 'SLR kamaraddayda' iPhone-ka meel kasta. Waad ku mahadsantahay arjiga laga heli karo App Store (iyo Google Play) waxaad kuxirankartaa kamarada (runti kaadhka SD) iyo ka hel sawirada iPhone ama iPad, soo dejiso sawirrada ku jira, u dir ama u tifaftir, oo hadhowna ku soo dejiso kombiyuutarkaaga haddii aad rabto.
Sida iska cad waxaad sidoo kale marin u leedahay shabakadaha bulshada (Facebook, Twitter, Instagram…) iyo nidaamyada keydinta daruuraha (Dropbox, Google Drive, iCloud…). Dhammaan qalabka laga heli karo iPhone-kaaga ama iPad-kaaga Waxaad uheli doontaa iyaga sawirrada kamaraddaada SLR, iyo sida ugu fiican dhammaan, meel kasta oo aad joogtid.
Haddii aan eegno waxa ku jira xirmada, Trascend WiFi SD Card ayaa si macquul ah qiime ahaan macquul ah. € 37 waxaad heli doontaa kaarka 10GB Class 16 SD iyo akhristaha kaarka SD SD / MicroSDMarka lagu daro isku xirnaanta WiFi ee aan soo sheegnay, oo runtii ah qaybta muhiimka ah ee badeecada. Moodooyinka kale ee la midka ahi waxay leeyihiin qiime laba jibbaar noqon kara. Waxaan ka helay qiimaha ugu fiican Amazon, waxaad si toos ah uga heli kartaa gujinaya halkan.
Aragti ahaan dejintuna waxay ahayd uun fur iyo ciyaar. Si cadaalad loo helo waa in la dhahaa kamaradeyda kuma jiraan liiska moodooyinka iswaafaqsan in summaddu ay ku bixiso websaydhkeeda, taas oo runtii laga yaabo inay gacan ka geysatay dhibaatooyinkii aan ku soo dhex galay bilowgii. Sidaas oo ay tahay, waxay ahayd dhowr tijaabo illaa aan ka heli karo furaha wax walbana waxay u shaqeeyeen "ku dhowaad" si qumman.
Waxaan asal ahaan ogaaday in kamaradaydu caadi ahaan "ka baxsan tahay" mooyee inaad si firfircoon u qaadatid sawir, sidaas darteed waxay ahayd lagama maarmaan in la kiciyo qaabka «Live View» si ay had iyo jeer u noqoto mid firfircoon oo markaa kaarka ayaa abuuri doona shabakadaada WiFi. Markii shabakada uu sameeyay kaarka la qabtay, "WIFISD" ayaa ka soo muuqatay liiska shabakadaha la heli karo ee iPhone-kayga waxaana awooday inaan ku xirnaado. HORTA isku xirnaanta, waa inaad maamushaa arjiga rasmiga ah ee 'Trascend' (Wi-Fi SD) oo aad raacdaa talaabooyinka qaabeynta.
Codsiga waxaad ka heli kartaa dhammaan sawirrada kaarka ku yaal, oo ku soo dejisan kartaa iPhone ama iPad iyo Waad ku mahadsan tahay liiska "Share" ee iOS 8, ku soo dir WhatsApp, Telegram, Twitter, Dropbox ... ama kaliya ku soo dejiso cirifkaaga. Hadafkii la gaadhay
Abku maahan wax layaableh naqshadeynta, laakiin shaqada ayuu qabtaa. Kaliya hal cillad, oo aan ku adkeysanayo inay sabab u tahay xaqiiqda ah in kamaraddaydu aysan soconayn: waxaa jira ikhtiyaar ah in lagu xiro kamaradda shabakadda WiFi ee gurigaaga oo sidaas darteed maahan inaad ka jarto iPhone-gaaga ama iPad-ka oo aad ku xirto shabakadda kamaradda, laakiin dhammaantood waxay ku xiran yihiin isla shabakad isku mar ah. Xaaladdayda waa inaan u qaabeeyaa mar kasta oo aan furo kamaradda, taas oo ah wax aad u xanaaq badan oo aan ku dhammaaday isticmaalkeeda.
Mid ka mid ah layaabka ayaan la kulmay isla markii aan ku xirayo iPhone-kayga kaarka adoo adeegsanaya barnaamijka iOS-ka ah wuxuu ahaa ogeysiin ah inay jiraan qalab cusub oo loo heli karo kaarka SD. Kadib cabsidaydii ugu xumeyd ayaa bilaabatay, maadaama khibradeyda ku saabsan cusbooneysiinta qalabka firmware aysan aad u fiicneyn. Waa hagaag, waa wax iska soo horjeedda, maaddaama Trascend uu leeyahay codsi taas ah waxaad kala soo bixi kartaa degelkooda, la jaan qaada Windows iyo Mac OS X (faahfaahin aan inta badan dhicin) iyo taas waxaan ku cusbooneysiiyay qalabkeyga SD-ga daqiiqado yar gudahood qaab aad u fudud.
Karo Kaadhka WiFi SD
Qiimaha la hagaajiyay
Qoraal deg deg ah iyo akhris
Waxaa kujira adapter USB
Dejin aan macno lahayn
Isku xirnaanta tooska ah ee internetka oo aan ku qanacsaneyn
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Kala-bax Wiilka SD Card, ku dar WiFi kamaraddaada
Hal su'aal, miyey saameyn ku yeelataa batteriga kamaradda si uun markaad isticmaaleyso wifi kaarka?
AhombrAndrés meel uun waa inuu kahelaa Awood uu ku shaqeeyo waxyar ama caymis badan oo saameeya Batariga. Waan ogahay inay jiri doonaan dad ka heli doona adeegsi xiisa leh laakiin hadaan xisaabta ku dareyno in sida caadiga ah kamarad fal-celis ah waxaad ku shaqeysaa qaraarada sare, wareeji 16 megabytes x sawir ... Marka hore, waxaad cuntaa xusuusta iPhone-ka kala wareeji labadooda iyo, wifi wuxuu si hubaal ah u shaqeyn doonaa waqti dheer sidaa darteedna la adkeeyay inuu saameynayo batteriga. Salaan, FRANK